ဘေဘီလေးတွေက အမိဝမ်းထဲမှာ ဘယ်လိုသင်ယူနိုင်သလဲ? သူတို့ကိုကူညီဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု - Chit MayMay
Home Mom and Baby ဘေဘီလေးတွေက အမိဝမ်းထဲမှာ ဘယ်လိုသင်ယူနိုင်သလဲ? သူတို့ကိုကူညီဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု
Prenatal learning ဆိုင်ရာ အသိပညာက အရမ်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိပေမယ့် မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုများစွာမှာ ကလေးတွေက မမွေးခင် အမိဝမ်းထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်သလဲ? သင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလား? ဆိုတာတွေကို အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မမှတ်မိခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တော့ အမိဝမ်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ သင်ယူမှုက ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အတူလိုက်ပါလာတဲ့ အချို့သော ခံစားချက်တွေနှင့် အတွေးနှီးနွယ်ဆက်စပ်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဒီပညာရေးအမျိုးအစားနဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေအကြောင်းကို နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သင်ယူခြင်း
ပညာရေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သင်ယူမှုက လူမှုရေးအဆင့်မှာ လူသိများတဲ့(သို့) အရမ်းကျယ်ပြန့်တဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုက ဇီဝဗေဒသာမက biopsychic နဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အမိဝမ်းထဲမှာရှိနေစဉ် မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးနှင့်အတူရှိခဲ့တဲ့ မသိစိတ် (သို့)အသိစိတ်ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး communications လုပ်ခဲ့ခြင်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
၂။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်က အမိဝမ်းထဲမှာ ဘာသင်ယူနိုင်သလဲ
မကြာသေးခင်က သုတေသနတွေအရ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ အမိဝမ်းထဲမှာ ရှိချိန်ကနေ သင်ယူတယ်လို့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် Annie Murphy Paul က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် ဒီသင်ယူမှုတွေက အရေးအပါဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့က မိခင်ရဲ့အသံကို သိပြီး သင်ယူကြပါတယ် – ဝမ်းထဲမှာ ကလေးကို လွယ်ထားရတဲ့သူရဲ့အသံက သိသာထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် သူတို့အများဆုံးခွဲခြားနိုင်တဲ့အရာ၊ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအသံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် ကြိုတင်လေ့လာခြင်းနှင့် အချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က အရသာအကြောင်းလည်း သင်ယူကြပါတယ် – ကလေးက အရသာမရွေးနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါကမမှန်ပါဘူး၊ အမှန်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ စားတဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ အရသာများစွာရှိပြီး သန္ဓေသားက အဲ့ဒါတွေကို အများအားဖြင့် မျိုချပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ မွေးဖွားပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ အဲဒီအစားအစာတွေက သူတို့အတွက် အရသာရှိပြီး ပိုဦးစားပေးပုံရလာပါတယ်။
သူတို့က ဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ယူကြပါတယ် – အမိဝမ်းထဲမှာ သူတို့ကြားတဲ့အရာပေါ် အခြေခံပြီး ဘေဘီလေးတွေဟာ သူတို့နားကလူတွေရဲ့ ဘာသာစကား၊ သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာ ပြောတတ်တဲ့ ဘာသာစကားကို စတင်သင်ယူကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့မိခင်ဘာသာစကားရဲ့လေသံနဲ့ ငိုတတ်ကြပါတယ်။
အမေနှင့်အတူ သင်ယူခြင်း – ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အနံ့၊ အသံ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေကနေ(သို့) သူမအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကစလို့ အရာရာတိုင်းကို ကလေးက တနည်းနည်းနဲ့ လက်ခံပါတယ်။ မိခင်မှတဆင့် ကလေးလက်ခံရရှိတဲ့ ဒီသိမြင်နားလည်မှုတွေနဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေကို information အဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာ ကလေးကို ဘယ်လိုသင်ပေးနိုင်မလဲ
ကျွန်တော်တို့က ဗိုက်ကို လက်ဖြင့် ကြင်နာစွာ ပွတ်သပ်ပေးတဲ့အခါ ကလေးက ဒီရွေ့လျားမှုတွေကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီလှုံ့ဆော်မှုက ဦးနှောက်ကို ရောက်သည့်အထိ တဆင့်ပေးပို့ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ ဒီအပိုင်းပေါ်မှာ လှုပ်ရှားမှုတွေ တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
သဘာဝနဲ့ အလင်းတုနှစ်ခုစလုံးက မတူညီတဲ့ ပြင်းထန်မှုတွေနဲ့ ဝမ်းဗိုက်မှတဆင့် ကလေးဆီကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ သုတေသီတွေက သန္ဓေသားတွေဟာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်မှာ အစက်လေးတွေကိုသာ တွေ့ရနိုင်ခြေပိုများကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊။ ဒါက ကလေးဟာ ပြင်ပလောကကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာကို ပြသပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ၊ အခြေအနေတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေများစွာကို ဖမ်းယူသိမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အသံတွေကို register လုပ်ပြီး သိမ်းထားသော်လည်း အနာဂတ်မှာ အချို့သောဂီတတွေကို မှတ်မိနိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန် ၁၈ပတ်ခန့်မှာ ကလေးငယ်တွေဟာ မိခင်ရဲ့ အစာအိမ်အသံတွေနဲ့ နှလုံးခုန်သံတို့ကို နားစွင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
motor system နှင့် စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေမှတဆင့်
အမိဝမ်းအတွင်းမှာ ကလေးက မိခင်ဟာ တည်ငြိမ်သော အနေအထားရှိ/မရှိကို နားလည်နိုင်ပါတယ်၊။ သူတို့မှာ သူတို့ရဲ့အတွင်းနားကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့၊ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးနေသော personal space အာရုံခံစားမှုတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သန္ဓေသားဟာ မိခင်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အချင်းမှတဆင့် မက်ဆေ့ချ်တွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
Previous articleထာဝရတည်မြဲသော ကလေးဘဝရဲ့ အမှတ်အသားသုံးခု
Next articleစိတ်ခံစားချက် မရင့်ကျက်တဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ လက္ခဏာ (၇)ချက်
ကလေးရှိတဲ့ အမေတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ရူးကြောင်ကြောင်အရာ(၈) ချက်
စိတ်ခံစားမှု ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိသော ကလေးတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်ဖို့ မိဘတိုင်းလုပ်ရမယ့် အချက် (၇)ချက်